Salaadda Si Loogu Badbaado Cilaaq Fashilmay | MADAXWAYNAHA ADDUUNKA
Bogga ugu weyn Salaadda Salaadda Si Loogu Badbaado Xiriir Fashilmay
Salaadda Si Loogu Badbaado Xiriir Fashilmay
Waxaa jira kuwo badan oo fashilmay guurka maanta. Waxyaabo badan oo jahwareer leh ayaa galay guurka waxayna baabi'iyaan isbahaysiga farxadda leh. Dhowr maalmood ka hor, war ayaa lagu baahiyay dhammaanba dhallaanka waddanka waxaana laga sii daayay dhammaan xarumaha warfaafinta ee ku saabsan haweeney reer Ingiriis ah oo si fudud loogu aqoonsaday Sanda Maryam oo sida la sheegay dishay ninkeeda gaalnimo darteed.
Macquul ahaan, dad badani waxay doorteen in markii urur shaqaale uusan shaqeynaynin, waxa ugu wanaagsan ee labada lamaane sameyn karaan ay tahay in ay maraan dariiqooyinkooda u gaarka ah. Halka, taasi ma aha doonista Ilaah midnimo. Marka, maxaad sameyneysaa marka xiriir uusan sifiican u shaqeyneynin? Markaad isku daydo dhan, waad awoodi kari weyday mana shaqeynayaan, miyaad iska fadhiisataa oo daawanaysaa waxyaabaha sii xumaanaya? ama waad iska aamusaysaa adigoo aamusnaan leh adoo aan la tartamin oo u oggolaan qof kale inuu kaa kaxeeyo ninka ama naagta. Sikastaba, hadaad iweydiso, waxaan kuu sheegayaa waqtiga ugu fiican ee ilaaheey aadayo salaada. Ma jiro waqti kale oo aan meel allabari uga dhiso xiriirkaas kan hadda ka badan hadda. Haddii aad waxyaabaha ugaga tagtid xaaladdooda burburka hadda, markaa waad hubaysaa inaad guurka ka dhici doontid dhowaan. Maxaa loo xalin waayey meesha oo dhan salaadda.
Maanta waxaan raadineynaa qaar ka mid ah salaadiinta shaqsiyeed ee xiriirka xumaaday, salaadahan waa duco shaqsiyeed dhexeeya adiga iyo Ilaah. Waxaad u kici doontaa inaad xiriirkaaga sare u qaaddo Ilaah salaadda, waxaad u baahan doontaa inaad ku mashquuliso qalbigaaga iyo iimaankaaga badbaadinta xiriirkaaga. Salaad qalbi furan ayaa had iyo jeer heli doonta taxadarka Ilaah. Waxaan ku hoos soo uruuriyay xoogaa duco xoog leh xiriir cibaado, iimaan geli iyaga oo iimaanka ku hel mucjisooyinkaaga.
Duco Codsi Shaqsiyeed Xiriir Fashil:
Aabe qaaliga ah ee jannada ku jira, xiriirkeygu wuxuu hada kusii jeedaa dhagaxa hadaan waxba laga qaban, waxaa laga yaabaa inuu dhaqso uqoro masiibo aan la sharixi karin. Ma doonayo in gurigeygu burburo, ma doonayo in guurkeygu noqdo mid guuldarraysta, waxaan ku weydiisanayaa in naxariistaada aad u hagaajiso qaybaha burburay ee xiriirkeyga magaca Ciise.
Aabbo Sayid, sidaan fahamsanahay in xiriir kasta ay jiraan dad ku lug leh. Kitaabkuna wuxuu ina fahansiinayaa in labo aysan dhaqaaqi karin inay heshiiyaan mooyee. Halka, sideen ku heshiin karnaa markaan si dhib yar xitaa isu fahmayno? Sayidow, waxaan kaa codsanayaa inaad nasiiso nimcada aan marwalba isku fahmi karno. Waxaan ka soo horjeedaa awood kasta oo isfaham la'aan ah oo naga dhaxeysa, na sii nimcada aan marwalba isku fahmi karno. Rabbi iga caawi nin ahaan / haweeneyda inaan marwalba u nuglaado baahida xaaskeyga, i sii nimcada aan marwalba ku fahmo markay hadlaysid iyo marka aysan xitaa eray bixin. Waxaan rabaa inaan xaaskeyga / ninkeyga u noqdo nin jecel / xaas leh iyo aabe masuul u ah caruurteyda. Waxaan ku canaantaa Shaydaanka gurigayga, waxaan uga hor imanayaa mid kasta oo ka mid ah xumaantiisa uu dhigay inuu burburiyo nabadgelyada gurigayga, waxaan ku martiqayaa Amiirka Nabadda gurigayga, waxaan weydiisanayaa in Amiirka nabaddu uu gurigayga ka dhigto hoygiisa magaca Ciise Masiix.
Rabbiyow Ilaahey, waxaan rabaa nimcada inaan marwalba ixtiraamo xaaskeyga / Ninkayga, ma doonayo inaan noqdo nin / naag marwalba jilcisa xoogiisa muruqa ah ee ka dhanka ah haweeneyda / ninkeeda, i sii mudnaanta aan marwalba kula heshiiyo / iyada. Waxaan kaa codsanayaa inaad adigu siiso isaga / iyada nimcada inuu had iyo jeer i ixtiraamo sidoo kale, inuu isagu / iyadu i ixtiraamaan xushmadda aan mudan yahay ee magaca Ciise Masiix.
Sayidow Ilaahow, eraygaagu wuxuu leeyahay Rabbiga ka cabsashadiisu waa bilowga xigmadda. Waxaan kaa codsanayaa inaad baqdintaada ku abuurto qalbiyadeenna. Na sii nimcada aan kaa cabsanno, in markaan labadeennaba kaa cabsanno; waxba iskama yeeli doonno midba midka kale. Ku abuur qalbiyadeenna iyo jacaylka aan la dhimin, jacaylka u muuqda mid dhaliil ka baxsan, jacayl u eg wax ka baxsan kuwa wax sheega, waxaan kaa codsanayaa inaad qalbigeenna ku oggolaatid. Sayidow fadlan, na baro sida aan nafteenna u jeclaan karno in uusan cadaw ina dhex mari doonin magaca Ciise Masiix.
Sayidow Ilaahow, waxaan baabi'inay xiriirka eraygaaga, waxaan u dhignay si ku saleysan dardaarankaaga inaan xoog, maamul ama isu imaatin aan awood u yeelan doonin inuu kala jaro. Jacaylkaagu ha ku sii jiro qalbigayaga, Oo jacaylkaaguna gurigayagu dhex yaalliin. Waxaan ku xoojinayaa xidhiidhka jacaylka ee inaga dhexeeya dhiigaaga qaaliga ah. Ereygaagu wuxuu leeyahay wuxuu Sayidku isku xidhay, ninna yaan la kala qaadin, waxaan ka hadlayaa wax alla wixii doonaya inuu dhexdiida ka dhex abuuro, waxaan u baabi'inayaa adiga awoodaada, waxaan kula soo horjeeday dhiigaaga magaca Ciise Masiix.
Rabbiyoow waxay ku ducaynaysaa duufaanta kacsan ee xiriirkeyga hada, waxaan kaa codsanayaa inaad kulahadasho nabad magaca Ciise Waxaan codsanayaa in gacmahaaga bogsiinta ay dul saaran yihiin qayb kasta oo dhaawac ah oo ku saabsan xiriirkayga. Rabbiyow Ilaahow, ha u oggolaan duufaantaan ku meel gaarka ah inay si joogto ah noo kala dhex dhigto, na sii nimcada aan ugu shaqeyno si qaan gaar ah iyo tan ugu muhiimsan xagga ruuxa ah inaynaan kugu dembaabin magaca Ciise Masiix.
Sayidow, waxaan ka baryayaa in duufaankan hadda socda ee xiriirkeygu uusan ii keenaynin inaan ku dembaabo. Adiga ayaa ah kan kaliya ee hagaajin kara qalbi jaban. Waxaan ku weydiisanayaa inaad qaadatid shaagagga xiriirkeyga, waxaan ku weydiisanayaa inaad noqon doonto badmaaxa markabkeyga guurka. Maxaa yeelay waan ogahay marka aad shiraacato iyo markaad taayirada qabsato, markabka inuu hubo badqabkiisa, Rabbi waxaan siinayaa markabka xiriirkeyga, waxaan kaa codsanayaa inaad u shiraacato meel ujeedo leh. Rabbiyow waan kaa tegayaa inaad si buuxda xilka u qabato, wax kasta oo aqoontayda ah iyo maskaxdayda ayaan iska dhigay, waxaan kaa codsanayaa inaad adigu na bari doonto naftaada, habka aan nafteenna ula xidhiidhi karno, sida saxda ah ee looga jawaabi karo, Sayidow waxaan ku weydiisanayaa inaad na bari doontid magaca Ciise Masiix.
Rabbiyow, dhammaadka duufaankan, na sii nimcada inaan weli kugu adkaynno. Ha noo oggolaan in aan ka leexanno kuleylka hadda jira, na sii nimcada aan kugu xoogeysanno, in kastoo, ma aragno wax xal ah hadda, laakiin na sii nimcada aan had iyo jeer kugu rajaynno. Waan ognahay in tani ay tahay daqiiqad tijaabo ah, waxaan weydiisanayaa in marka wejigan uu sii dhammaado, na siiso nimcada inaanan iimaankeenna ku lumin. Magaca Ciise Masiix.
article PreviousDuco Loogu Dirayo Nin Khamro Leh
Next articleDucada shaqsiyadeed ee nimcada guurka adag
Faustina Boateng Juun 28, 2020 X XXX: 10 am
Ilaah baa mahad leh ducooyinkan xoogga leh n Waxaan ogahay in si tartiib tartiib ah Ilaahay iigu guursan doono dhagaxa adag ee ciise masiix ee Naasared, waad ku mahadsantahay ciise, ilaah ha ku barakeeyo.
BENEATA TABITA Febraayo 5, 2021 Markay tahay 7:51 am
Elsie Luulyo 12, 2021 saacadu markay ahayd 11:43 am
Ek bid die 8 gebede oor my huwelik ek weet God sal kragtig Ingryp in my huwelik en ons weer as man en vrou kamer en bed sal deel. Ons waa Amper 30 Jaar getroud
Akhriska Kitaabka Quduuska ah ee Maalinlaha ah Maanta oo ah Oktoobar 18th 2018
Sabuurradii 23 Salaadda ee Difaaca iyo Difaaca
Qodobbada Salaadda ee Ka Soo Horjeeda Fashilka Ganacsi
30 Qodobbada Salaadda ee Nadiifinta Ruuxa